Puntiland oo dooneysa in la weeqo Somaliland | Gabiley News Online
Puntiland oo dooneysa in la weeqo Somaliland
Waxa laga soo ogaadey hey’ado faro-badan oo caalami ah, deggana inta badan Kenya, Ethiopia iyo Djibouti ay had iyo habeen u qorayeen been abuur faro-badan oo lagu weeqaayo jiritaan ummadda reer Somaliland. Waxay dunida dacaladeeda ku daadsheen ama ay ku fidiyeen khariidado ama maabab ay sameysteen oo qeyb ka mid ah Somaliland illaa Sheikh ay ku darsadeen gobolka loo yaqaan puntland. Waxay qorteen in ay ay tiradoodu tahay boqolkiiba 50% tirada somali oo dhan, wxay sheegteen in boqolkiiba 40 ay ka yihiin gobolka Kismaayo ama jubadda hoose, waxay qorteen in ay boqolkiiba 40 ka haan jireen gobolka Benaadir. Waxay qorteen in ay yihiin qabiilka Somali ugu hanti-badan, ugu cilmi badan, ugu ilbaxsan ayna soo ahaayeen qabiilka xukuma meesha loo yaqaan Somali.
Waxay afka u dhuubaan hadh iyo habeen ciidamada mareykanka iyo ku yurub meel kasta ha joogaan eh, ayagoo ku qancinaaya ama isku dayaya in ku qanciyaan ciidamadaas shisheeye in Somaliland tahay meel argagixiso oo loo baa hanyahay in samada laga duqeeyo. Meesha ay si weyn ugu guuleysteen in wax laga dhegeysto waa Nairobi oo ay si fiican ula caweeyaan hey’adahaas.
Dhambaalkan waa mid keliya ku boorinaaya ummaddaas la daalaaa dhaceysa nolol maalmeedkooda, duufaano iyo abaarana ay cadkooda koosteen in ay ogaadaan in caqabaduhu iska badan yihiin oo loo baahan yahay in la foojignaado. Somaliland cidda aan arki karin, Somaliland cidda aan maqali karin, Somaliland cidda aan urin karin, Somaliland cidda aan qalbiga siin karin, Somaliland cidda aan marnaba liqi karin…………………..horeyna waa loo ogaa maanta wey qaawismeysaa!